Typhoon Hagibis: njirimara, nhazi na ihe egwu | Network Meteorology
Anyị maara na ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ nwere ike ịbawanye ngwa ngwa. Ọtụtụ n'ime ha nwere edemede nke 5 ma ọ bụ ndị yiri ya. Mgbe oke ikuku okpuru ruru ụdị ndị a, a na-eji aha ajọ ifufe ma ọ bụ ajọ ifufe ama ya. Ọtụtụ n'ime ha na-egosi obere kọmpat anya nke ọma nke pụtara ìhè, ọkachasị na satịlaịtị na foto radar. Ha na-abụkarị njirimara ndị na-egosi ike nke ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ. Taa, anyị ga-ekwu maka ya Typhoon Hagibis, ebe ọ bụ na ọ bụ nnọọ ihe pụrụ iche na usoro nke anya ya na ọzụzụ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara Typhoon Hagibis, njirimara ya na nhazi ya.
2 Oke ike nke Typhoon Hagibis
Ọ bụrụ na anyị anaghị ezo aka n'oké ifufe na ajọ ifufe, ihe ndị a bụ akụkụ atọ: anya, mgbidi anya na ụdọ mmiri ozuzo. Mgbe anyị na-ekwu maka anya oke ifufe ahụ, anyị na-ekwu maka etiti oke ikuku okpuru mmiri nke usoro ihe niile na-agagharị. Ná nkezi, anya nke ajọ ifufe na-abụkarị ihe dịka 30-70 kilomita na dayameta. N'ọnọdụ ụfọdụ ọ nwere ike iru nnukwu dayameta, ọ bụ ezie na ọ bụghị nke kachasị. Naanị nnukwu mmiri ozuzo ndị ahụ na-eme ya. Oge ndị ọzọ, anyị nwere ike ịnwe anya belatara nke pere mpe ma pere mpe. Dịka ọmụmaatụ, Typhoon Carmen ga-enwerịrị anya nke kilomita 370, nke kachasị ibu na ndekọ, ebe Hurricane Wilma nwere naanị otu anya nke kilomita 3.7.
Activefọdụ ifufe na ajọ ifufe na-ebute anya a na-akpọ anya mgbazinye ma ọ bụ anya mgbazinye anya. Ọ na-adị ma ọ bụrụ na anya ikuku cyclone dị obere karịa ka ọ dị na mbụ. Nke a bụ ihe mere Typhoon Hagibis na 2019. Anya pere mpe na-eme ka ajọ ifufe dị ike karịa ka ikuku dị n'akụkụ anya na-agba ọsọ ngwa ngwa. Oké ifufe nke ebe okpomọkụ nwere anya mgbazinye na -emekarị mgbanwe dị ukwuu na ike dị ukwuu n'ihi ikuku ha jikọtara.
Otu n'ime njirimara Typhoon Hagibis anyị na-ahụ ya mesoscale size. Nke a pụtara na ọ bụ ajọ ifufe nke siri ike ịkọ n ’ọ ga-esi n’ ụzọ ifufe na ike ya. Akụkụ ọzọ e ji mara Typhoon Hagibis, na mgbakwunye na anya ajọ ifufe ya, bụ mgbidi anya na ìgwè mmiri ozuzo na-anọchite anya ihe niile dị mkpa na oké ifufe. N'ikpeazụ, ụyọkọ mmiri ozuzo bụ igwe ojii ndị ahụ na-eme ifufe ma na-agagharị na mgbidi anya. Ha na-adịkarị ruo ọtụtụ narị kilomita n'ogologo ma dabere na oke oke mmiri ozuzo ahụ na mkpokọta. Ndị agha ahụ na-agbagharị n'oge na-adịghị anya mgbe ọ bụla anyị nọ n'ebe ugwu ụwa ma ha na-ejikwa ike dị ukwuu na-eburu ifufe.
Oke ike nke Typhoon Hagibis
Otu n’ime nsogbu pụrụ iche n’akụkọ ihe mere eme kemgbe edere ajọ ifufe na ajọ ifufe bụ Typhoon Hagibis. Ọ bụ oke ajọ ifufe nke gafere ebe ugwu nke Mariana Islands dị na Pacific Ocean na Ọktọba 7, 2019. Ọ gafere agwaetiti ndị a dịka ụdị Atọ 5 na-ekpo ọkụ nke ikuku ifufe na-efe nke usoro 260 kilomita kwa elekere.
Ihe kacha pụta ìhè banyere ajọ ifufe a bụ ogo ya na-esikwu ike na mberede. Ọ bụkwa na ọ nwere ogo nke ike nke obere ikuku mmiri rụzuru. O mere n'ime nanị awa 24 inwe ikuku nke 96 km / h nwere ikuku 260 km / h. Increaserịbawanye na ọsọ a na ikuku dị elu bụ ụdị nkwalite siri ike na ngwa ngwa.
Ruo ugbu a, Ngalaba Nchọpụta Ajọ Ifufe nke NOAA depụtara naanị otu ajọ ifufe dị na Pacific Northwest nke mere ya: Super Typhoon Forrest nke 1983. Taa, a ka na-ahụta ya oke ifufe kachasị ike n'ụwa. Kedu ihe kachasị pụta ìhè na nnukwu nha a mana obere anya nke na-agbagharị n'etiti na gburugburu anya buru ibu dị ka a ga-asị na ọ tọrọ n'ime. Ka oge na-aga, dayameta nke anya ajọ ifufe ahụ tụrụ kilomita ise na ise, ma anya nke abụọ ejide ya.
Anya nke oke ifufe ahụ bụ etiti ajọ ifufe nke na nkezi anaghị adị oke ibu, a na-akpọkwa ya pinhead eye. Bọchị ole na ole o guzobesịrị, ọ bịarutere n'àgwàetiti Anatahan a na-ebighị ebi ma si na Micronesia pụọ. Ike gwụrụ mgbe ọ kwagara n'ebe ugwu, ihe dịka otu izu gachara ọ ghọrọ ajọ ifufe Atọ 1-2 mgbe ọ ruru Japan. Aha Hagibis pụtara ọsọ na Tagalog, ya mere aha ya.
Ewere ya dị ka ihe kachasị njọ na mbara ala ebe ọ bụ na n'ime awa ole na ole, ọ sitere na oke ifufe nke ebe okpomọkụ dị oke ifufe gaa na ajọ ifufe 5. Ọ bụ mgbanwe kachasị ọsọ na oge niile, yana otu n'ime ihe kachasị ike n'ihi oke ike ya . Site n'ịdabere na mgbazinye isi mere ka ọ bụrụ ajọ ifufe dị egwu.
Otú o si kee ya, dị ka ajọ ifufe ndị ọzọ, mere n’etiti oké osimiri. Anyị maara na n'ihi nkwụsị nke nrụgide, ikuku na-achọ imeju oghere nke nkwụsị ahụ na nrụgide hapụrụ. Ozugbo ajọ ifufe ahụ riri nri n'oké osimiri ma rute na mmiri, ọ nweghịzi ụzọ ọ ga-esi na-eri onwe ya na karịa, yabụ na-efunahụ ike ka ọ na-abanye. 1983 Forrest super Typhoon, ọ bụ ezie na ọ nwere otu ọsọ ọsọ, ọ dị obere n'ihi enweghị otu ntụtụ anya.
Mgbanwe a enweela ọtụtụ ihe jikọrọ ya na njirimara ya dị iche iche. Ihe onyonyo satịlaịtị nke enwetara gosiri na o nwere obere anya n’ime otu nke ka ukwuu. Ejikọtara ha abụọ na-eme ka anya ha buru ibu ma mee ka ike ya bawanye. Dị ka iwu n'ozuzu, ajọ ifufe niile nwere anya nke dayameta ya na-adabere n'ike o nwere. Ọ bụrụ na ọ pere mpe na ọ dị ize ndụ karịa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Typhoon Hagibis na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ihe ikuku » Typhoon Hagibis